Duqa Muqdisho ‘Cumar Filish’ oo tagay goobta qaraxa uu ka dhacay ee Ex-Control Afgooye, Saxaafadana hadlay +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Duqa Muqdisho ‘Cumar Filish’ oo tagay goobta qaraxa uu ka dhacay ee...
Duqa Muqdisho ‘Cumar Filish’ oo tagay goobta qaraxa uu ka dhacay ee Ex-Control Afgooye, Saxaafadana hadlay +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa waxaa uu Warbaahinta kula hadlay Isgoyska Ex Control Afgooye ee Galbeedka Magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo ay la socdaan qaar ka mid ah Kuxigeenadiisa ayaa soo kormeeray goobtii uu ka dhacay weerarkii ismiidaaminta ee saaka ruxay Magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha ayaa Saxaafadda u sheegay in argagixisadu ay goobtaasi ka gaysatay xasuuq, ka dib markii uu sheegay inay laayeen dad fara-badan oo aan waxba galabsan.
Duqa Magaalada Muqdisho ayaa wuxuu xusay in uu jiro khasaaro fara-badan oo dhimasho iyo dhaawacba isugu jira, maadaama goobta uu qaraxu ka dhacay uu ahaa isgoys uu mashquul ka jiray, sida uu yiri.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay in ninkii is qarxiyay uu doonaayay inuu gudaha u soo galo Magaalada Muqdisho, hase ahaatee ay is hortaageen Ciidamadii Booliska ee goobtaasi ku sugnaa, si ay baaris amni xaqiijin ah ugu sameeyaan, markii dambena uu isku qarxiyay.
Gaadiidka gurmadka deg-degga ayaa waxay goobtaasi ka daabuleen tobonaan qof oo dhimasho iyo dhaawacba uu qaraxaasi ka soo gaaray. Dadka ku la’day weerarkan ayaa waxay u badan yihiin arday.
Soddon qof ayaa waxaa la ogyahay inay ku dhinteen qaraxaasi, iyadoo meydadka dadkaasi loo kala qaaday goobaha caafimaadka ee Magaalada Muqdisho. Sidoo kale tiro dhaawacyo ah ayaa la seexiyay isbitaalada ku yaala magaaalada. Dad qabay dhaawacyo culus ayaa isbitaalka Madiina ugu geeriyooday dhibaatadii qaraxa ka soo gaartay.
Gaari caasi ahaa oo rakaab waday ayaa waxaa la soo sheegayaa inaanu jirin hal qof oo nolol kaga badbaaday ismiidaamintaasi. Gaarigan waxaa la socotay dhawr iyo toban qof.
Dadka khasaaraha ugu badan uu weerarkaasi ka soo gaaray ayaa ah arday dhiganeysay Jaamacadda Banaadir ee Magaalada Muqdisho, kuwaa oo ku la’day falkaasi arxanka daran.
Saraakiisha caafimaadka ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga soo xigtay in dhimashada ay gaari karto afartan qof.
Illaa iyo hadda ma jirto koox sheegatay masuuliyadda weerarkan, balse weerarada ceynkani oo kala ah ayaa waxaa aallaaba dusha u rita mintidiinta Al Shabaab.
gudoomiyaha gobolka banaadir Filish
Isgoyska Ex Control Afgooye oo qarax xooggan ka dhacay